‘शिक्षामन्त्री ज्यूलाई राष्ट्रपतिलाई श्री ६ बनाउने रहरचाहिँ किन पलायो ?’ « हातमा खबर
प्रकाशित मिति : २०७७, २५ जेष्ठ आईतवार १४:११
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बजेटमा समेटेका कार्यक्रमबारे प्रति आपत्ति जनाएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा थापाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममाथि आपत्ति जनाएका हुन् । गतवर्ष ५ अर्ब बजेट छुट्याएको ठाउँमा यो कार्यक्रमका लागि यो वर्ष ६ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा खर्च कटौती प्रस्ताव राख्दै थापाले यो संघीयता र संविधान विरोधी कार्यक्रम भएको बताए । उनले यो कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा ईडीसीडीमा तलब नपाएर बसेका सहर्जकर्ता, विद्यालयका कर्मचारी, भोकै बसेका आंशिक प्राध्यापकहरुको याद आएन ? भन्दै शिक्षामन्त्रीलाई प्रश्न गरे ।
शिक्षा मन्त्रालयको अध्ययनले ५७ हजार शिक्षक अभाव भएको देखाए पनि त्यसअनुसार बजेट नआएको बताए । थापाले भने, ‘माननीय शिक्षामन्त्री ज्यूलाई सम्माननीय राष्ट्रपति ज्यूलाई श्री ६ बनाउने रहरचाहिँ किन पलायो ? ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भनेर हिजो राजाले बक्सिस मारेको जस्तो राष्ट्रपतिले खुट्टा टेकेको ठाउँमा मन लाग्दा पैसा दिन पाउने कार्यक्रम संघीयता विरोधी छ, संविधान विरोधी छ, व्यवस्था विरोधी छ ।’
उनले एक जना शिक्षक राख्न नसकेको शिक्षक स्वयम सेवक कार्यक्रमलाई एक अर्ब ५० करोडबाट बढाएर दुई अर्ब २३ करोड बजेट दिइएको उल्लेख गरे । उनले भने,‘एसईई खारेज गरौं, केही बोल्ड डिसिजन गरौं र यो वर्ष विद्यार्थीको व्यवस्थापन गरौं भनेर लगातार मन्त्रीलाई भन्दा यै हो बजेट ? यै हो कार्यक्रम ? त्यसैले, यसले थप निराश बनाएको छ ।’